साग तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनेमा शशंकित छु : अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ « News24 : Premium News Channel
साग तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनेमा शशंकित छु : अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति : Nov 06, 2019
आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगिता आयोजनाका दृष्टिले मात्र होइन, पदक र राष्ट्रको साख जोगाउने हिसाबले पनि नेपालका लागि विशेष छ । यस पटक घरेलु मैदानमा हुने सागमा नेपालले २७ खेलमा सहभागीता जनाउँदै छ ।
नेपाललाई सागमा सर्वाधिक सफलता दिलाउने मार्सल आर्ट्स विधामा कराते पनि एक हो । नेपालमै आयोजना भएको आठौं सागमा नेपालले ऐतिहासिक सफलताका साथ दोस्रो स्थान हासिल गर्दा करातेको भूमिका मुख्य थियो । नेपालले त्यो बेला जितेका कुल ३१ स्वर्णमध्ये १४ स्वर्ण करातेले मात्र जितेको थियो । आयोजकको हिसाबले नेपालले यसपटक १३औं सागमा करातेलाई समावेश गरेको छ ।
करातेको समावेशले नेपाली कराते टोली उत्साहित पनि बनेको छ । तर, मार्सल आर्ट्समध्ये करातेको पावर हाउसका रूपमा चिनिएको नेपाल अहिले भने खस्कँदोे अवस्थामा छ । सागमा निरन्तर सफलता हात पार्दै आएको करातेबाट यसपटक घरेलु मैदानमा कस्तो प्रदर्शनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
हालसम्म कुनै पनि संस्करणमा खाली हात हुन नपरेको करातेले पुरानै साख जोगाउन सक्ला कि नसक्ला ? आजको छ प्रश्नमा हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको अध्यक्ष तथा पुर्व कराते खेलाडी, प्रशिक्षक, आठौँ र नवौँ संस्करणको सागमा स्वर्ण विजेता दीपक श्रेष्ठ संग सँग विशेष कुराकानी गरेको छ ।
टिभी जर्नलिष्ट बिरेन्द्र जैरुसंगको कुराकानीमा श्रेष्ठले साग तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनेका आफु शशंकित रहेको बताउनु भयो । तोकिएको मिति नजिकिदैँ गर्दा खेलका लागि भौतिक निर्माणको तयार अवस्थालाई हेर्दा सो शशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको हो ।
मंसिर १५ बाट काठमाडौँ र पोखरामा संञ्चालन हुने सागमा करातेबाट नेपालले ठुलो अपेक्षा गरेको तर, उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा करातेको स्तर खस्किदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाली खेलाडीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तरको टेक्निकमा अभ्यस्त गराउन नसकिएको उहाँको भनाई छ । नेपालमा करातेको विकास र विस्तार हुनुको साटो करिव २० वर्ष अघिको अवस्थाभन्दा झनै खस्कदो अवस्थामा रहेको र खेलाडीहरुको हत हितमा अझैसम्म पनि राज्य गम्भिर बन्न नसकेको गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै खेलसंग सम्बद्ध सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुले आश्वासन मात्रै बाड्ने प्रवृतिले पनि खेलहरुको विकास र विस्तार हुन नसकेको उहाँले बताउँनुभयो । तर, अहिले नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले खेलाडीहरुको हत हितका लागि पहल गरिरहेको श्रेष्ठले बताउँनुभयो ।